माओवादी ध्रूवीकरणको आवश्यकता किन ? «
माओवादी ध्रूवीकरणको आवश्यकता किन ?
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार १९:५१
जनयु’द्ध, जन-आ’न्दोलन, मधेश र जनजातीको आ’न्दोलन उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित जातीको अधिकार प्राप्तिका लागि भएका थिए । ती आ’न्दोलनहरु राष्ट्रयता, जनतन्त्र र जनजीवीकाको सवालसँग जोडिएका थिए । आन्दोलनमा मजदुर, किसान, महिला, विद्यार्थी, दलित तथा सुकुम्बासीहरुले पनि आफ्नो सक्रिय सहभागीता जनाएका थिए । यी आ’न्दोलनहरुमा नागरिकहरुले ठूला-ठूला पीडा र क्ष’तिहरु भोग्नु पर्‍यो । यीनै संघर्षहरुले देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान बन्यो । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नु पर्ने कुराहरु मौलिक हकमा राखियो । धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीता संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ ।
आ’न्दोलनबाट जे जति उपलब्धी प्राप्त हुनु पर्दथ्यो त्यति नभए पनि केहि उपलब्धी प्राप्त भएका छन् । संविधान निर्माण पछिको सरकारले ती उपलब्धीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै बाँकी उपलब्धीहरु प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढनु पर्ने थियो । विडम्बना नै भन्नु पर्दछ त्यो हुन सकेन ।
वामगठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुईतिहाई नजिकको मत पाएको थियो । गठबन्धनको सरकार बन्यो त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने अवसर पाए । यो अवसर पाउने प्रधानमन्त्रीको काम भनेको संविधानमा भएका उपलब्धीहरुलाई व्यवहारमा उर्तान निरन्तर लाग्नु पर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली हावादारी भाषण गर्न थाले । प्रधानमन्त्री नै हावादारी रुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि उनको नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दिशा समाउन सक्ने कुरै भएन । यहि समय प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई सहि दिशा समाउन रचानात्मक सुझाव र दवाव दिन आवश्यक थियो ।
यसरी देश र नागरिकले पीडा भोग्दै विगतका आ’न्दोलनबाट प्राप्ति भएका उपलब्धी ध्वस्त हुन लागि रहेका बेला जनयुद्धका नेताहरु प्रचण्ड, वैद्य, किराती र विप्लव लगायतले माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
दुरभाग्य नै भयो उनी एकताको नाममा एमालेमा विलय भएका थिए । यो घटनाले ओलीलाई वेतुकको गफ गर्न झन सजिलो वातावरण बनायो । सरकारको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश नेता कार्यक्रताहरु भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुब्न पुगे त्यसलाई रोक्न प्रतिपक्ष दलहरुले महत्वपूणर् भुमिका खेल्न सकेन्न । सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु जनताको काम गर्न छोडेर कुर्सीको निम्ति नाङ्गै हिड्न तयार भए । जस्को परिणमा स्वरुप मुलुक अहिलेको जटिल अवस्थमा आइपुग्यो ।
अन्ततः केपी-प्रचण्डले भनेको वामपन्थीहरुको एकता पनि समाप्त भयो । माधव पक्ष एमालेमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कोभिड प्रकोपमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई वेवास्था गरेर एकअर्काका विरुद्ध ठूलाठूला आमसभा गर्दा कोभिड प्रकोप तिब्र गतिमा फैलियो । यी सबै घटनाहरुले गर्दा नागरिकले कोभिड प्रकोप लगायत अनेकौ किसिमका पीडा भोगी रहेका छन् ।
अर्कोतिर जनतालो ठूलो संघर्षबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्र नै समाप्त हुने त हैन भन्ने गम्भिर प्रश्न समेत खडा भएको छ । यसरी देश र नागरिकले पीडा भोग्दै विगतका आ’न्दोलनबाट प्राप्ति भएका उपलब्धी ध्वस्त हुन लागि रहेका बेला जनयुद्धका नेताहरु प्रचण्ड, वैद्य, किराती र विप्लव लगायतले माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
यो परिवेशमा ठोस परिस्थितको ठोस विश्लेष्ण गर्दै सबै आ’न्दोलनको जग रहेको महान् जनयु’द्ध गर्ने माओवादी शक्तिहरु महाध्रूवीकरण अन्तर्गत सबै लामबद्ध हुन जरुरी छ । ती शक्तिहरुले एकै ठाउँमा बसेर अहिलेसम्मका घटनाको गम्भिर ढंगले समिक्षा गर्दै कसको कहाँ र कसरी गल्ती भयो त्यसको सत्य सच्चाईमा पुग्नु पर्दछ । संविधानमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरुको रक्षा र वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्ने मार्ग फेला पारेर देश र नागरिकको हितमा माओवादी आन्दोलनलाई एकढिका बनाएर अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
-बिमल निरौला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव हुन ।